Dock Ramp Vagadziri & Vatengesi | China Dock Ramp Fekitori
China Dock Rampyakakamurwa kuita mhando mbiri, imwe nharembozha doko uye imwe pane yakamira yadhi ramp.Fixed dock ramp chishandiso chakakosha chinobatsira chemarori kutakura zvinhu uye kuburitsa zvakaiswa papuratifomu yekuchengetera. Kureba kwechikamu chepamberi chebhodhi bhodhi chikuva kunogona kuchinjiswa zvinoenderana nekukwirira kwekamuri yemotokari, uye muromo unowirirana unogara uri padyo nekamuri.
Chiteshi cheDock Ramp chinotungamirwa ne hydraulic pombi chiteshi uye mota yemagetsi. Iyo yakagadzirirwa maviri ma hydraulic cylinders. Imwe inoshandiswa kusimudza chikuva uye imwe inoshandiswa kusimudza iyo clapper. Izvo zvinoshanda kune chiteshi chekutakura kana chiteshi chechitoro, imba yekuchengetera kurodha nezvimwe.
Kuisa chinzvimbo: 6 ~ 15ton.Offer yakagadzirirwa basa. Saizi repuratifomu: 1100 * 2000mm kana 1100 * 2500mm. Ipa sevhisi yakagadzirirwa. Spillover vharafu: Inogona kudzivirira yakanyanya kumanikidza kana muchina unokwira kumusoro. Chinja kumanikidza. Emergency kuderera vharuvhu: inogona kuenda pasi kana iwe ukasangana nechimbichimbi kana kudzima simba.
Mhando dzese dzekubata mota dzinogona kupfuura zvakanaka bhiriji rekutakura zvinhu pakati peimba yekuchengetera uye yekutakura. Iyo inotora imwechete bhatani kudzora modhi, iri nyore kwazvo kushanda. Anoshanda mumwe chete ndiye anodiwa kuti ashande, uye zvinhu zvinogona kukurumidza kutakurwa uye kuburutswa. Inoita kuti iro rinorema bhizinesi kurodha uye kudzikisa basa riite nyore, rakachengeteka uye nekukurumidza, nokudaro richichengetedza yakawanda yebasa, kugadzirisa basa kushanda, uye kuwana yakanyanya hupfumi mabhenefiti. Iyo ndiyo michina inodikanwa yekuchengetedza uye hunyanzvi kugadzirwa kwemabhizimusi emazuva ano nekuvandudza kumhanya kwezvinhu. Imwe ndiyo nharembozha yiraundi, Iyi nzira yedoko inoshandiswa senge bhiriji rekuchinja forklifts kufamba kubva pasi kuenda kungoro kana marori akatakurwa uye kuburutswa. Kufamba kwayo kunogona kusangana nezvinodiwa zvehasha kurodha uye kuturura mashandiro munzvimbo dzakasiyana. Yakagadzirwa neakakwira-simba manganese simbi rectangular chubhu ine yakanyanya kukwirira simba. Iwo materu akagadzirwa nemazino esimbi nesefa, iyo ine yakanakisa anti-skid kuita. Pamusoro pemidziyo inorapwa nekupfura nekudonha uye kuburuka, uye pombi yemagetsi inoshandiswa senge simba rekusimudza. Hapana magetsi ekunze anodikanwa, ayo ari nyore kushandiswa kwekunze munzvimbo dzisina magetsi.